Umaki: ukumakethwa kwezindlu nomphakathi | Martech Zone
Umaki: ukumakethwa kwezindlu nomphakathi
Ukuthengiswa Kwezakhiwo Nezindawo Zokuxhumana
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 20, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 U-Adam Encane
UDoug ukhulume kokuthunyelwe kwakamuva ukuthi ukuhlanganiswa okuqinile nokuzenzekelayo kuzoba kanjani ukhiye kubathengisi be-imeyili. Sisebenza nabathengisi beReal Estate futhi yilokho kanye abakufunayo. Izinto ezimbalwa okufanele uzazi ngezindawo ezithengiswayo: Abathengisi bezezakhiwo akubona ubuchwepheshe futhi abanamnyango we-IT ongabiza uma bedinga usizo. Bangosomabhizinisi, basebenzise ubuchwepheshe ngokushesha, futhi njalo balinganise umthelela. Imvamisa bangabakhangisi abayinkimbinkimbi kakhulu -